दोरम्बा हत्याकाण्डको नालबेलीः दोरम्बा हत्याकाण्डका ‘जिउँदो शहीद’ले दियो यस्तो बयान - samabeshionline.com
दोरम्बा हत्याकाण्डको नालबेलीः दोरम्बा हत्याकाण्डका ‘जिउँदो शहीद’ले दियो यस्तो बयान
प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७५, बिहीबार १०:४२
साउन ३१, काठमाडौं । ०५२ देखि ०६२ सम्मको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गए पनि दुई हत्याकाण्ड, जसले तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षलाई अप्ठेरोमा पारे । माओवादीले गरेको बाँदरमुढे हत्याकाण्ड र राज्यले गरेको दोरम्बा हत्याकाण्ड पटक–पटक बल्झिने युद्धका घाउ हुन् । यद्यपि यस्ता सयौं हत्याकाण्ड विस्मृतिमा पुगिसकेका छैनन् ।
यसैक्रममा ०६० साल साउन ३२ गते तत्कालीन सरकारी वार्ता टोली र माओवादी वार्ता टोलीबीच दाङको हापुरेमा शान्ति वार्ता चलिरहेको थियो । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले गरेका थिए भने माओवादी वार्ता टोलीको नेतृत्व डा.बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । हापुरेमा वार्ता चलिरहेकै बेला खबर फैलियो– रामेछापको दोरम्बामा शाही नेपाली सेनाले २१ जना माओवादी नेता कार्यकर्ताको सामुहिक हत्या गर्‍याे ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको राज्य पक्ष र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको विद्रोही पक्षबीच वार्ता असफल भएर मुलुक पुनः युद्धमा फर्किने आधार दोरम्बा हत्याकाण्डले बनायो । युद्धविरामको समयमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका मेजर रामराज पोखरेलको सनकमा माओवादी कार्यकर्ताहरुको कत्लेआम गरिएको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
जसरी बाँदरमुडे पीडितले प्रचण्डलाई पटक–पटक प्रश्न गरिरहेका छन्, दोरम्बा हत्याकाण्डका पीडित परिवारले कसलाई प्रश्न गर्ने ? बाँदरमुडेमा स्मारक बन्छ भने दोरम्बामाथि सौतेलो व्यवहार किन ? यस्ता प्रश्न पनि बेलाबेलामा उठाइएकै छन् ।
आखिर संसार हल्लाउने र देशमा थप ७ हजार मान्छेको ज्यान लिने युद्धलाई निरन्तरता दिन कारक बनेको दोरम्ब हत्याकाण्ड कसरी भएको थियो ?
यसपटक हामीले दोरम्बा हत्याकाण्डमा सेनाको कब्जाबाट भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका माओवादी आन्दोलनका एक योद्धा मैनकुमार मोक्तान (मदन) लाई भेटेर लामो कुराकानी गर्‍याैं ।
युद्धरत तत्कालीन नेकपा माओवादीका रामेछाप जिल्ला सेक्रेटरी तथा जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमिसारसम्म भएका मोक्तान दोरम्बा हत्याकाण्डका ‘जिउँदो शहीद’ हुन् । पार्टी एकीकरणअघिसम्म तत्कालीन माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य रहेका मोक्तानले दोरम्बा हत्याकाण्डको प्रत्यक्षदर्शीका रुपमा त्यो क्षणको स्मरण यसरी गरेका छन्ः
त्यो भयानक विपत्ति
तत्कालीन जिल्ला इन्चार्ज हरि दाहाल (ललित), सेक्रेटरी म, जिल्ला जनसरकार प्रमुख बाबुराम लामा (पुष्प) सहितको टोली गुन्सीबाट दोरम्बातर्फ लाग्यौं । हामीसँग जनमिलिसिया हेडक्वार्टरका कमाण्डर रक्तिम र जनमुक्ति सेनाको सानो टुकडी पनि थियो । युद्धबिरामको बेला भएकाले कुनै भिडन्तको आशंका थिएन ।
त्योबेला आफ्नो च्यानलभन्दा भन्दा बाहिर कसैसँग कुरा गर्न पाइन्नथ्यो । मैले उहाँलाई फोन गरेपछि उहाँले अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गर्नुभयो होला । त्यसपछि पार्टीले केही समयमै वार्ता भंग गरेर युद्धमा फर्किने निर्णय गर्‍याे । हामी त्यहाँबाट हिँडेर दिमीपोखरी पुग्यौं । यति ठूलो त्रासदी युद्धकालमा कहिल्यै भोगिएको थिएन । नसोचेको घटना भएको थियो ।
त्यो घटनापछि दोरम्बामा सेनाको ब्यारेक बसेको अहिलेसम्म उठेको छैन । वास्तवमा दोरम्बा हत्याकाण्ड तत्कालीन सेनाका मेजरको सनकमात्र थियो कि राज्यले नियोजितरुपमा गराएको थियो ? अहिलेसम्म प्रष्ट छैन । तर, यसप्रकारको मानवताविरुद्धको अपराध गर्ने शाही सेनाका कमान्डरलाई कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गरेर सरकारले शान्ति सेनामा पठायो ।
आज पनि दोरम्बामा मारिएका कमरेडका परिवारका सदस्य भेट्दा हामी भावविव्हल हुन्छौं । अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस् भन्नु बाहेक हामी केही गर्न सक्दैनौं । तर, पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । हामी त निरन्तर क्रान्तिमा छौं, बाटोमात्र फरक हो । अनलाइनखबरमाबाट
नयाँ रोटा वर्ष आज देखि सुरु … अमित गिरीद्धारा रोटरी क्लव अफ राजधानीको प्रिसिडेन्टको पदभार ग्रहण
काभ्रेमा मयुर यातायात माथि काभ्रे बस र मिनीबस सेवा समितिको दादागिरी रोकिएन
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता घोषणा भोलि
“नेबि संघको आगामी नेतृत्वमा ऋषिकेश जंग शाह यसकारण आउनसक्छन”
मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ भनेर सोच्नु ठूलो भूल-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री